Shiinaha galvanized warshad mesh silig welded iyo alaab | XINTELI
Magaca badeecada: mesh silig galvanized welded
Waxyaabaha: silig kaarboon ah oo tayo sare leh
Daaweynta dusha: galgasho kulul galvanized & koronto galvanized
Mesh silig galvanized mesh silig ka samaysan yahay tayo sare leh silig bir bir carbon. Ka dib markii alxanka kaalinta iyo la xirrira by qalab farsamo sax ah oo sax ah si toos ah, daaweynta dusha sare ee habka lagu miiray zinc la qaatay. Wax soosaarka caadiga ah ee caadiga ah ee Ingiriiska wuxuu keenaa dusha mesh siman oo nadiif ah, adag oo xitaa qaabdhismeed, iyo waxqabadka guud ee wanaagsan.
Shabaggeedii silig galvanized welded waxaa loo qaybiyaa laba nooc: galvanized koronto iyo kulul galvanizing.You dooran kartaa galvanized kulul galvanized ka dib markii alxanka ama kulul lagu rusheeyey galvanized ka hor alxanka.Haddii aad u baahan tahay waqti dheer anti-miridhku ama loo isticmaalo dibadda, Waxaan kuu soo jeedinayaa inaad doorato kulul lagu rusheeyey galvanized.
Waxaan ku bixin karnaa laba nooc: duub mesh silig oo duuban iyo alwaax mesh silig oo alxan leh.
Mesh size: 1/4 ``, 3/8 '', 1/2 ``, 5/8 '', 3/4 ``, 1 '', 2 `` iwm
Dhexroor silig: BWG16 ~ BWG25
Dhererka: 5m, 10m, 25m, 30m, 45m iwm
Ballaaran: 0.m ~ 1.5m
Astaamaha: bey'ada saaxiibtinimo, si fudud u liidata, muddo dheer adoo isticmaalaya nolol, dusha sare iyo siman.
Mesh silig welded waxaa caadi ahaan loo isticmaalaa in warshadaha, beeraha, dhismaha, gaadiidka, macdanta iyo warshadaha kale. Sida mashiinada ku lifaaqan, xoolaha iyo xayawaanka xoolaha, ubaxyada iyo alwaax ku lifaaqan, ilaalada daaqadaha, marinnada marinnada, baqashada digaagga, dambiilo ukunta iyo dambiilo cunto guriga iyo xafiiska, dambiilo waraaqo ah iyo qurxin
3.5 Bixinta iyo bixinta
Hore: PVC Daahan daahan silig welded
Xiga: PVC shabag silig laba geesood leh dahaarka leh